Septhemba 3, 2018 - Ellicott Dredges
Umthombo: Umhlaba Dredging & Marine Ukwakhiwa Mhlawumbe esinye sezibonelo eziholayo Dredging nomthelela ngokuqondile ukukhula komnotho isizwe kungabhekwa eVenezuela. Ukugcinwa yonyaka Dredging e Lake Maracaibo futhi eMfuleni Orinoco lidlule kwezigidi ezingu-70 cubic metres. Ngaphezu kuka-70% womkhiqizo kazwelonke waseVenezuela uqhamuka kuphethiloli okhishwe ezingxenyeni ezingaphansi kweLake Maracaibo, ngaleyo ndlela kudale isiminyaminya esikhulu ngamathangi angena naphuma echibini. I Instituto Nacional de Canalizaciones (INC) unomthwalo wemfanelo, njengoba inhlangano kahulumeni, ukuklama futhi afeze konke Dredging nocwaningo ahlobene nobunjiniyela ...
Umthombo: I-World Dredging Mining & Construction Usonkontileka odonsa umhlaba nosebenzisa umhlaba usebenzisa i-14-inch Ellicott® Brand B890 dredge esanda kuthengwa ukusula iziteshi zokufinyelela emiphakathini eyisithupha eyiziqhingi eTorres Strait ekude phakathi kweNyakatho Australia neNew Guinea. IHall Contracting Pty. Ltd., enekomkhulu layo eSunshine Coast yaseQueensland, ithole ithenda yomsebenzi weTorres Strait kuhulumeni wase-Australia. Incwadi yesivumelwano kuhilela iziteshi Dredging for kokwehla izikebhe ezinkulu ukuphakela esiqhingini imiphakathi eziyisithupha ukuqondisa kusuka Cairns esikhundleni off-ukulayisha ukuba izikebhe ezincane futhi abalindele namagagasi. I Logistics ukusebenza kuleli lebeyisehlane utshelwa Hall Inkontileka ukuze ...